Homeसमाचारकार्यक्रममा अ’चानक नीताको बुवाको प्रवेश हुँदा, हरिहर अधिकारी किन गा’यव भए (भिडियो हे’र्नुहोस्)
April 5, 2021 admin समाचार 3342
श्रीमत भागवत गीताको अफि’सियल अनाउन्समेन्टको कार्यक्र’ममा अभिनेत्री नीता ढुंगाना पुगेकी थिइन् । उनीहरुले यो प्रोजेक्टको अफिसियल अनाउ’न्समेन्ट गर्न लागेका थिए । जसमा नीता ढुँगाना र पुस्कल मुख्य छन् । यो औपचारीक कार्यक्र’ममा अभिनेत्री निताको वुवा पनि पुगेका थिए । उनीहरु धार्मीक पहिरनमै पुगेका थिए । नीताको गला’मा माला थियो भने पुस्कल पनि धार्मीक पहिरनमा थिए । पुस्कल धार्मीक आस्था मान्ने भएकाले पनि यो प्राजे’क्टमा सहभागी हुन पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको बता’एका छन् ।
तर नीताको यति ठूलो कार्य’क्रमको घोषणा हुँदा नीताको प्रेमी हरिहर अधिकारी भने देखिएनन् । उनी पनि यो कार्यक्र’मका मुख्य पात्र हुन् । तर उनी सह’भागी नभएका कारण सहभागी अन्यले प्रश्न गरेका थिए । यस वारेमा प्रश्न गर्दा नीताले उनी अन्य काममा व्यस्त भएका का’रण सहभागी हुन नपा’एको बताइन् । उनले यो औपचारीक घोषणामा सहभागी हुन आवश्यक नठानेर स’हभागी नभएको हुनसक्ने बताइन् । उनले अन्य यो’जनामा भने हरिहर संधै सहभागी भएको बताइन् ।
ज्योतीष हरिहर अधिकारीले ज्योतीष विद्या प्रति वि’श्वास राख्थेनन् । त्यसैले त्यो भित्र के छ भनेर जान्न ज्यो’तिष विद्या पढे । तर अहिले उनी यहि क्षेत्रवाट करिब विश्व चर्चित भएका छन् । उनले ज्योतिष शास्त्र नमान्ने ब्यक्ति’हरुलाई यसवारे आकर्षण जगाउन आफु ज्योतिष भएको बताएका छन् । म ज्योतिष शास्त्र मान्ने भन्दा नमान्ने’हरुका लागि ज्योतिष भएको हुँ, उनले भने कहिल्यै म यति च’र्चित हुँला भन्ने कल्पना गरेको थिइन् । उनले अबको नयाँ वर्षमा फेरी रोग लाग्ने सम्भा’वना रहेको बताएका छन् । २०७८ साल रोग कारक भएका कारण सबैले निकै चना’खो हुनुपर्ने बताएका छन् । रोग कारक ग्रह राजा र मन्त्री दुवै रहेकाले मंगलवार माछा मासु खान छोडिदिन पनि आ’ग्रह गरेका छन् ।
योगा ध्यान र मे’डिटेशनमा ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । २०७८ सालमा सेना सकृय हुनुपर्ने अवस्था आउने पनि बता’एका छन् । प्राकृतिक विपत्ती वा राज’नीतिक अवस्था जे कारणले पनि सेना सकृय हुन सक्ने उनको भनाई छ । उनले आफ्नो विवाहको बारेमा अहिले भन्न नसक्ने बताएका छन् । उनले विवाहको बारेमा आफ्नो अभिभावकलाई सो’ध्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बुवा आमाको अनु’मति विना विवाह नगर्ने बताएका छन् ।
उनले आ’फ्नो वारेमा केही नभने पनि बुवा आमाले सबै कुरा थाहा नपाएको बताएका छन् । उनले भारतमा निता ढुंगा’नासंग संगै रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले नितासंग प्रेम पनि स्वीकार गरेका छन् । भारतमा संगै रहेको बता’एका उनले प्रेम पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले साथी भनेर फिल्मको काममा रहेकी नितालाई भेट्न गएको बताएको भएपनि नितासंग समय विताएको स्वी’कार गरेका छन् । इताजा खबरबाट
March 17, 2021 admin समाचार 2234
पूजा गर्दा धूप बाल्नुको रहस्य यस्तो छ जान्नुहोस्
January 12, 2021 admin समाचार 3944
सामा’न्यतय पूजा पाठ गर्दा धूप बाल्ने प्रचलन चलिआएको छ । तर, पूजाको समयमा धूप किन बा’लिन्छ त भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आज हामीले पूजामा धुप बाल्नुको रह’स्य उल्लेख गरेका छौँ । खासमा धूपको
January 11, 2021 admin समाचार 4262
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205478)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196844)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196341)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (196187)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194650)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194339)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192561)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192166)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184967)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161641)